Tababare Thomas Tuchel oo shaaciyey tirada saxiixyada uu doonayo suuqa xagaaga, kaddib markii uu Chelsea kula guuleystay Champions League – Gool FM
Tababare Thomas Tuchel oo shaaciyey tirada saxiixyada uu doonayo suuqa xagaaga, kaddib markii uu Chelsea kula guuleystay Champions League
(Chelsea) 31 Maajo 2021. Thomas Tuchel ayaa diyaar u ah inuu xoojiyo safkiisa kooxda Chelsea kaddib markii uu Blues ku hoggaamiyay hanashada Champions League, iyadoo tababaraha reer Jarmal uu doonayo inuu labo ama saddex laacib ku soo daro kooxda suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Madaxweyne Roman Abramovich ayaa lacag badan qarash-gareeyay sanadka 2020, iyadoo Tababare Frank Lampard loo fasaxay inuu soo xero galiyo xiddigo dhowr ah sida Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz iyo Edouard Mendy.
Si kastaba ha noqotee Tuchel ayaa doonaya in dib u dhiska kooxda aan la joojine la sii wado kaddib markii uu garoonka Stamford Bridge ku soo celiyey koobka Champions League, sidoo kale kooxdu ay kal ciyaareedkan ku dhammaysatay afar sare ee Premier League.
Tababaraha reer Jarmal ayaa shaaciyey tirada ciyaartoyda uu doonayo inuu kooxdiisa ku soo kordhiyo, waxaana isagoo ka jawaabayay su’aal Suxufiyiintu weydiiyeen oo ahayd inta xiddig ee uu la soo saxeen doono uu carabka ku dhuftay: “Labo ama saddex ayaa aad iyo aad u fiicnaan lahayd.
“In mar walba aad keento tamar cusub, wiilal cusub oo su’aal geliya aaminaaddii hore, qof kastana kula loollama tababarka iyo ciyaarahaba, sidaa darteed, waxay ila tahay inay fiican tahay in labo ama saddex saxiix aannu samayno.” ayuu hadalkiisa ku daray Tuchel.